Will Ferrell sy Paul Rudd dia kintana ao amin'ny The Shrink Next Door amin'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Andian-dahatsoratra vaovao premieres amin'ny Apple TV + hahafaly ny mpandray anjara rehetra. Raha raisina ihany koa dia manana mpilalao roa tsara indrindra izy amin'izao fotoana izao. Farafaharatsiny raha ny momba ny hatsikana. Miresaka momba izany isika Will Ferrell y Paul rudd izay premiere ny andiany The Shrink Next Door. Azontsika faritana ho toy ny hatsikana mainty ity andiany vaovao ity. Izy io dia milaza ny fifandraisana lava misy eo amin'ny mpitsabo aretin-tsaina sy ny marariny indrindra.
Apple TV + dia nampiseho tamin'ny fantsona YouTube azy ny sary voalohany amin'ireo miniseries fizarana valo nandrasana hatry ny ela Ny Varavarana manaraka varavarana. Ilay hatsikana mainty vaovao dia misy mpilalao kintana rehetra tarihin'i Will Ferrell sy Paul Rudd, izay mpamokatra mpanatanteraka ihany koa ary premieres manerantany ny zoma 12 novambra, amin'ny Apple TV + ihany. Hanomboka ny fizarana voalohany amin'ireo andiany telo voalohany ity andiany ity, arahin'ny iray vaovao isaky ny zoma.
Nahazo aingam-panahy ny zava-nitranga marina, nitantara ny fifandraisana hafahafa teo amin'ny mpitsabo aretin-tsaina Dr. Isaac Ike Herschkopf (Rudd) sy ilay marary marary Martin aka Marty Markowitz (Ferrell). Nandritra ny fifandraisan'izy ireo lava dia niditra tsikelikely tamin'ny fiainan'i Marty i Ike. Mifindra any an-tranony any Hamptons mihitsy aza ianao mandresy lahatra azy hanendry azy ho filohan'ny orinasam-pianakaviana.
Ny andiany dia mandinika ny fomba fiasan'ny dokotera sy ny marary izay lasa ara-dalàna. Misy kintana ihany koa ity andiany ity Katherine Hahn, izay milalao an'i Phyllis, zandrin'i Marty, ary Casey Wilson ho Boniie, vadin'i Dr. Herschkopf.
Notarihin'i Michael Showalter y Jesse peretz ary nosoratan'i Emmy, Golden Globe, BAFTA, ary Georgia Pritchett, mpandresy WGA, The Shrink Next Door dia avy amin'ny Civic Center Media miaraka amin'ny MRC Television. Miorina amin'ny podcast ity nihaino indrindra ny taona 2019.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Will Ferrell sy Paul Rudd dia kintana ao amin'ny The Shrink Next Door, amin'ny Apple TV +